MKV fromat ​နဲ့ ​စာ​တန်း​ထိုး Movie ​များ​ထဲ​မှ ​စာ​တန်း​ထိုး​ဖိုင် Srt ​ဖိုင် ​ဘယ်​လို ​ပြန်​ထုတ်​မ​လဲ ... ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
MKV fromat ​နဲ့ ​စာ​တန်း​ထိုး Movie ​များ​ထဲ​မှ ​စာ​တန်း​ထိုး​ဖိုင် Srt ​ဖိုင် ​ဘယ်​လို ​ပြန်​ထုတ်​မ​လဲ ...
iDealshare VideoGo 5.2.9.5283 Multilingual + Crack
​ဟို​တစ်​ရက်​က ​ကျ​နော့်​ကို ​မေး​ထား​တာ​လေး ​ရှိ​လို့​ပါ. mkv format ​နဲ့ video ​ဖိုင် ​တွေ​မှာ ​ပါ​လာ​တဲ့ ​စာ​ဖိုင်​ကို ​ဘယ်​လို ​ပြန်​ထုတ်​မ​လဲ ​ဘယ်​လို ​ပြန်​ယူ​ရ​မ​လဲ​လို့ ​မေး​ထား​လို့ ​ဒီ​နည်း​လမ်း​လေး​ကို ​ပြော​ပြ​မ​လို့​ပါ။ ​လို​အပ်​တာ​ကို​ပါ ​တစ်​ခါ​တည်း ​တင်​ပေး​လိုက်​ပါ​တယ်။ ​တစ်​ချို့​ဆိုက်​တွေ​မှာ video quality ​ဘယ်​လောက်​ပဲ​နည်း​နည်း ​စာ​တန်း​ထိုး​တဲ့​စာ​သား​ကို ​မ​ဝါး​ရ​အောင်​လို့ ​တော်​တော်​များ​များ video ​တွေ​မှာ ​အ​ခု​လို ​စာ​ဖိုင်​ကို ​တွဲ​ပေး​ထား​တတ်​ပါ​တယ်။ ​အဲ့​လို​ကား​တွေ​က​နေ ​စာ​ဖိုင်​ပြန်​ပြီး ​ထုတ်​လို့​ရ​ပါ​တယ်။ ​ထုတ်​နည်း​က​လဲ ​လွယ်​ပါ​တယ်။ mkv format ​နဲ့ ​တင်​ထား​တဲ့ video ​တော်​တော်​များ​များ ​အ​ခု​လို ​တွဲ​ထား​တတ်​ပါ​တယ်။ ​လုပ်​နည်း​ကို​အောက်​မှာ​လုပ်​ပါ။ ​လို​အပ်​တာ​ကို ​အောက်​မှာ Download ​လုပ်​ပါ။ Google Drive ​က​နေ ​တင်​ပေး​ထား​ပါ​တယ်။ ​ဘာ​ကြော်​ငြာ​မှ ​မ​ခံ​ထား​ပါ​ဘူး။
၁။ Add file ​ကို​နှိပ်​ပြီး video file ​ကို ​သွင်း​ပါ။
၂။ File >> Properties ​ကို ​နှိပ်​လိုက်​ပါ။
၃။ ​အဲ့​လို​မျိုး ​စာ​ဖိုင်​တွေ​ကို ​တွေ့​ရ​မှာ​ပါ ​သူ့​ဘေး​က Save As ​ကို ​နှိပ်​ပြီး ​စာ​ဖိုင်​ကို ​သိမ်း​ထား​လို့​ရ​ပါ​ပြီ။ ​အ​ဆင်​ပြေ​လိမ့်​မယ်​လို့ ​မျှော်​လင့်​ပါ​တယ်။ ​ရွှင်​လန်း​ချမ်း​မြေ့​ကြ​ပါ​စေ .... converter ​ကို​အောက်​က​နေ ​ယူ​လိုက်​ပါ။
BOOTMGR is missing Error ​ကို ​ဘယ်​လို ​ရှင်း​မ​လဲ...
Window 8.1 (Pro) x64
Blog ​တစ်​ခု​လုံး​ကို ​နိုင်​ငံ​တ​ကာ ​ဘာ​သာ ​ပြောင...
PC ​အ​တွက် ​ယူ​နီ​ကုတ် ​သွင်း​နည်း (Online)
MKV fromat ​နဲ့ ​စာ​တန်း​ထိုး Movie ​များ​ထဲ​မှ ​စ...